Shirka u dhaxeeya Madaxweyne Farmaajo & Madaxda Dowlad goboleedyada oo maalintii labaad ka socda Muqdisho – HalQaran.com
Muqdisho (Halqaran.com) – Maalintii Labaad waxaa xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ka socda Shir u dhaxeeya madaxweynaha JF Soomaaliya iyo Madaxda dowlad goboleeyada dalka iyo Gobolka Banaadir.
Shirka oo shalay furmay ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa arrimaha la xiriira doorashada, sidii go’aan rasmi ah looga gaari lahaa si loo qabto doorasho laga wada heshiiyay.
Wararka ayaa sheegaya, in madaxweynayaasha maamullada Puntland iyo Jubbaland ay soo bandhigeen qodobbada qaar oo ay ka soo horjeedaan, kaasi oo ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb3.
Dhammaan dhinacyada ayaa si adag waxaa ay uga doodayaan arrimaha doorashada oo ah muhiimada shirka loo qabtay, waxaana maanta la filayaa in si aan caadi aheyn inay mas’uuliyiinta uga hadlaan arrimaha doorashada.
Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxda Dowlad goboleedyda, Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed shir ay ku yeesheen magaalada Dhuusmareeb ee caasimadda Galmudug ka soo saaray nooca ay noqoneyso doorashada Soomaaliya, balse waxaa qaadacay Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland taas oo keentay in shir kale lagu qabto Magaalada Muqdisho.
Si kastaba, shacabka Soomaaliyeed iyo saamileyda siyaasadeed ee dalka ayaa isha ku haya Shirka ka socda magaalada Muqdisho, halka xubnaha Beesha Caalamka ee taageerada siiya Soomaaliya ay kor kala socdaan shirka.
Madaxda ku shiraysa magalaada Muqdisho ayaa culeys lagu saaray inay heshiis ku gaaraan shirkaasi.
Tags: Madaxtooyada, Shirka Madaxweyne Farmaajo iyo dowlad goboleedyada